क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण नै धुम्रपान, स्ुर्तीजन्य पदार्थ, गुट्खा र मद्यपान सेवन नै हो
शुक्रबार, फागुन १४, २०७७ १०:१०:०५ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
प्राध्यापक डा. अजित नेपाल, वरिष्ठ नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ, पाटन अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, सुमेरु सिटी अस्पताल
दुई चार महिनाको फरकमा हुने मौषमका कारण पनि बढी मानिसहरु नाक, कान र घाँटीको विरामी बन्दै आइरहेका छन् । विशेष गरी अन्य मौषमको तुलनामा जाडो मौशममा नाक, कान र घाँटीका विरामीहरु बढ्ने गर्छन् । चिसोका कारण एलर्जी, जमिनको सतहमा बढी मात्रामा हुने पराग कणहरुले गर्दा पनि जाडो मौषममा बढी मानिसहरु विरामी पर्ने गर्छन् । यो मौषममा दमको रोगीहरुमा पनि एलर्जीको, पिनास, फाइरान्जाइटीस, कानमा ढुसी आउने र चिलाउने समस्याहरु बढी देखिने गर्छन् । यसै विषयलाई लिएर पाटन अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, सुमेरु सिटी अस्पतालमा नाक, कान र घाँटीको उपचारारत प्राध्यापक डा. अजित नेपालसँग खोजतलास साप्ताहिकले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
० जाडो मौषम र प्रदुषणका कारण नाक, कान, घाँटीमा बढी समस्या देखिन्छ भनिन्छ ? कारण के होला ?
सही भन्नु भयो । अन्य मौषमको तुलनामा जाडो मौशममा नाक, कान र घाँटीका विरामी केही बढी हुने अवस्था हो । यसको कारण चाहिँ मुख्यतया चिसोको एलर्जी, प्रदुषणको तह पनि विशेषगरी जमिनको सतहमा बढी हुने तथा पराग कणहरुले गर्दा पनि बढी हुन्छ । जाडोमा विशेषगरी दमको रोगीहरुमा पनि एलर्जीको, पिनास, फाइरान्जाइटीस, कानमा ढुसी आउने र चिलाउने समस्या लिएर पनि विरामीहरु उत्तिकै आउने गरेका छन् ।
नाक, कान र घाँटीको समग्र समस्याहरु धेरै भएकोले समस्यापिच्छे केही विशेष र केही नभलभचब िसावधानीहरु अपनाएमा केही हदसम्म केही समस्याबाट बच्न सकिन्छ । सबै त यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन । तै पनि सारांशमा भन्दाखेरी धुलो, धुँवा, चिसोबाट जोगिन सकेमा रुघा, पिनास, फाइराइन्जाटीस आदिबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै चिल्लो, पिरो, अमिलो धेरै नखाएमा पनि अम्लले हुने एक प्रकारको घाँटीको दुखाईबाट बच्न सकिन्छ । यसैगरी नाक, कान नकोट्याउने, जस्तोपायो त्यस्तो पानी वा पोखरीमा ननुहाउने गरेमा नाक दुख्ने, रगत बग्ने वा कान दुख्ने, पाक्ने समस्याबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
सामान्य भाषामा भन्दा रुघा अलि लामो समयसम्म लाग्यो वा सामान्य उपचारले केही हप्तासम्म पनि ठीक भएन भने त्यसलाई पिनास वा -Sinusitis) भन्न सकिन्छ । पिनासको धेरै कारणहरु हुनसक्छ जस्तै धुलो, ध्ुवाँ, चिसोको एलर्जी, भाइरस, ब्याक्टेरिया, ढुसी, परागकण, गाईवस्तु वा अन्य पाल्तु जनावर जस्तै कुकुर, विरालो, चराहरुको भुत्ला, रौं आदिसँगको संसर्ग लामो समयसम्म भइराखेमा साथै कहिले काहिँ नाकको भित्री वनोटको गडबढ जस्तै हड्डी बाँगो हुनु वा लामो समयसम्म एलर्जीको पिनास आदि भएमा मासु पलाउने (Polyps, Fungal Sinusitis) आदि समस्या पनि हुन सक्छ ।
० पिनासको रोकथाम अनि उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
मैले माथि उल्लेख गरेका केही बच्न सकिने कारणहरुबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ । उपचारको सन्दर्भमा यदि सामान्य उपचार जुन नजिकको नाक, कान र घाँटीको विशेषज्ञको परामर्शबाट लिन सकिन्छ । यदि हप्तौंदेखि महिनौंसम्मको लामो समस्या भएमा नाकको इन्डोस्कोपीबाट सीटी स्क्यान गरेर हेर्नुपर्छ । यदि नाकमा मासु Polyps_ पलाएको छ, हड्डी बाँगिएको छ वा नाकको वरीपरी अनुहारको खोक्रो (हावा भरिएको) हड्डीहरुमा धेरै फोहोर जमेको छ भने बाहिर छालामा नचिरिकन दुर्बिनको प्रविधिबाट शल्यक्रिया -FESS_ गरेर पनि पिनासको निराकरण गर्न सकिन्छ ।
कान नसुन्ने कारणहरुलाई धेरै भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया साना नानीहरुमा जन्मजात वा कानको जाली पाछाडी पानी जमेर हुनसक्छ । अलि ठूला वा वयस्कलाई कान पाक्ने, कान भित्रका स—साना हड्डीहरु जाम हुने, जाली भित्र खिचिने वा कहिलेकाहिँ कानेगुजी जमेर पनि हुनसक्छ । त्यस्तै बृद्ध अवस्थाकालाई (६० वा ७० वर्ष कटेपछि) क्रमशः कानको नशा सुक्दै गएर कान कम सुन्ने पनि हुन्छ । तर, साना नानीहरुलाई पनि कहिलेकाहिँ मेनीजाइटिस, टाइफाइड वा हाँडे आदिले पनि कानको नशा सुकाउन सक्छ । यस्तै ध्वनी प्रदुषण वा कुनै कुनै औषधीले पनि कानको नशामा असर पार्न सक्छ ।
सामान्यतया एलर्जीको पिनास -Allergic Rninitis) वा नाकको मित्रको हड्डी कुहिने खालको एक प्रकारको पिनास -Atropic Rhinitis) मा गन्ध कम वा पुरै थाहा नपाउने हुन सक्छ । साथै नाकभित्र मासु -Polyps_ पलाएमा पनि गन्ध आउँदैन वा कम हुन्छ । अहिले त तपाईंले सुन्नु भएकै होला, समय समयसामयीक रोग Covid-19 (कोरोना भाइरस) को एउटा प्रमुख लक्षण पनि गन्धमा ह्रास आउने वा पुरै चाल नपाउने हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २९, २०७७, १३:३४:००